पहिचान र स्वाभिमाननिम्ति | Madhesi - United We Stand
पहिचान र स्वाभिमाननिम्ति
December 29, 2007 at 9:56 am 1 comment
– महन्थ ठाकुर , अध्यक्ष, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीवं संयोजक, बृहत् राजनीतिक शक्ति निर्माण अभियान
देश र मधेस दुवै अहिले युगान्तकारी परिवर्तनको पर्खाइमा छन् । आज देशका जनता र्सवसत्तावादीहरूको अन्त्य गरी र्सार्वभौम सत्तासम्पन्न हुन चाहन्छन् । राजकीयसत्ता लगायत सम्पर्ूण्ा शक्तिको स्रोत हातमा लिई आफ्नो सर्वोच्चता स्थापित गर्न चाहन्छन् । तर यतिमात्रै जनताको चाहना होइन । जनताको वास्तविक चाहना हो, सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य र यसको जडोको समाप्ति ।ऐतिहासिक र अभूतपर्ूव एकबद्धतापर्ूण्ा मधेस आन्दोलन र प्रातःस्मरणीय महान उत्र्सर्गी ४२ सपुतको रगतको सन्देश यही हो । तर शासकको रूपमा परिणत राजनीतिक शक्ति जनताको यस पवित्र चाहनामाथि तुषारापात गराउन उद्यत छन् । परिणामस्वरूप सिमान्तकृत मधेसी समुदाय, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिलामाथि भइरहेको चौतर्फी शोषण र भेदभाव कालक्रमसाथ संस्थागत हु“दै गइरहेछ । तर सहिदको रगत खेर जाने छैन । उहा“हरूको सहादतले दिएको सन्देश पूरा गर्न हामी कृतसंकल्प छौं । हाम्रो यात्राको पवित्र लक्ष्य पनि यही हो । यात्रा संर्घष्ापर्ूण्ा भए पनि हाम्रो विजय निश्चित छ । यस विजययात्रामा सहयात्री बन्न हामी सबै मधेस अधिकारवादीलाई हार्दिक आमन्त्रण गछौर्ं । धेरै अबेर भइसक्यो, अब पर्खाइमा पर्नुहुन्न । लक्ष्यप्रति अग्रसर हुनु नै आजको एकमात्र आवश्यकता हो ।मधेस आफ्नो पहिचान, अधिकार र स्वाभिमानका लागि संर्घष्ामा जुटेको छ । यो मुक्तिका लागि संर्घष्ा हो । भेदभावपर्ूण्ा औपनिवेशिक शासनको अन्त्यका लागि संर्घष्ा हो।
शाहवंशीय शासकले पहाडी राज्य जितेका थिए । उनीहरूले पहाडमा आफ्नो शासन-प्रशासन पनि क्षेत्रीय रूपमा नै चलाए । तर तर्राई-मधेसमा उनीहरूले औपनिवेशिक शासकको रूपमा शासन गरे । शासन-प्रशासन तथा आर्थिक विकासका कार्यक्रममा मधेसीलाई सहभागी गरेनन् । अन्नपात, वीउ-विजन, काठ, हात्ती, लत्ताकपडाको आपर्ूर्ति मधेसबाट गरे । मधेस र मधेसीलाई भने उपेक्षित राखे । लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा मधेसीले सदैव संर्घष्ाशील रही सहभागिता प्रदान गरे । तर शक्तिको ढा“चामा कुनै परिवर्तन आएन । राजनीतिक, आर्थिक तथा रोजगारको क्ष्ँेत्रमा मधेसी, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति उपेक्षित भए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पछाडि परे । शासन-प्रशासनमा सहभागिता घट्दै गयो । आवाज उठाउ“दा विखण्डनवादी र साम्प्रदायिक भनियो । नेपाली राष्ट्रियता र संस्कृतिलाई परिभाषित गर्दा पनि मधेसीलाई टाढा राखियो । एउटा भाषा र एउटा भेषमा राष्ट्रियता देख्ने प्रयास भयो । निरंकुश राजतन्त्रमा राष्ट्रियता देख्ने प्रयास भयो । महेन्द्रवादी मण्डले राष्ट्रवाद अर्थात् भारत विरोधमा आधारित राष्ट्रवादको निसाना बन्यो मधेस, बेधिए र ज्यान गुमाए मधेसीहरू । मधेसी नागरिक बनेर राष्ट्रियतालाई राष्ट्रिय बनाउन खोजे, शासन-प्रशासनमा, सेना र पुलिसमा भर्ना भई राष्ट्रका यी संगठनलाई राष्ट्रिय रूप दिन खोजे, संसदमा आफ्नो भाषामा बोल्न खोजे, आफ्नो भेषभूषामा आउन खोजे, तर नारायणहिटीदेखि सिंहदरबारसम्म राज्यको हरेक अंगमा उपेक्षित र अपमानित हुनपर्‍यो।
शिर निहुराएर मुख थुनेर बस्न बाध्य बनाउने वातावरण तयार गरियो । आफ्नै घरखेत खलिहानमा, आफ्नै जग्गाजमिन भूमिमा विदेशी ठानिएको पीडा भोग्नुपर्‍यो । खण्डित राष्ट्रियता र अन्धराष्ट्रवादको तरवार सबै ठाउ“मा मेधसीको शिरमाथि झुन्ड्याइयो । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । भर्खरै चिरप्रतिक्षित सातदलीय २३ सूत्रीय सहमति र्सार्वजनिक भएको छ । यसका लागि संविधानसभाको चुनाव स्थगित गराइयो । राष्ट्रको ढुकुटी खेर फालियो, तर प्राप्ति ऋणात्मक नै रह्यो । सत्तँ र पदको बा“डफा“ड बाहेक अरू केही भएन । मधेसीलाई सम्बोधित गर्ने तर्राई-मधेसका जनताको आकांक्षालाई नियाल्न, वास्तविकतालाई बुझ्ने चाहनाको झलक पनि देखिएन ।अब मधेसी शिर निहुराएर होइन, ठाडो गरेर बा“च्न चाहन्छन् । आफ्नो घरखेत खलिहान, जग्गाजमिनको व्यवस्थापन आफैं गर्न चाहन्छन् । मधेसीहरू मधेसी सरकार चाहन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका चाहन्छन् । शासन-प्रशासन, पुलिस, सत्तँमा मधेसी देख्न चाहन्छन् । लैंगिक, वर्गीय, जातीय शोषण र सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य चाहन्छन्।
हाम्रँे माटोको, मधेसी सहिदको रगतको यही प्रण हो । हाम्रँे कदम त्यसैले अरू कसैको इसारामा होइन, यही माटो र सहिदको रगतको निर्देशनमा उठाइएको कदम हो । त्यसैले हामी गौरवान्वित छौं । यसमा पश्चातापको कहीं कतै कुनै गुञ्जाइस छैन । आफ्ना जनता, माटो र बलिदान विपरीत हि“ड्ने पछुताउ“छन् । न्याय र सत्यका लागि कदम उठाउने गर्व गर्छन्।
यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामन्ती वर्चस्ववाद र शोषणको पृष्ठपोषक राजतन्त्रको अन्त्य जरुरी छ । समता र लोकतन्त्रको अभ्यास जरुरी छ । त्यसैले तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीे लक्ष्य छ, गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संघीय नेपाल र आत्मनिर्ण्र्ााहितको स्वशासित तर्राई-मधेस- एक प्रदेश।
हामीमाथि विखण्डनवादी, साम्प्रदायवादी, विदेशीको इसारामा हि“डेको आरोप लगाइन्छ । तर वास्तवमा विखण्डनवादी त ती हुन्, जो अरूको कुरा सुन्न चाह“दैनन् । साम्प्रदायवादी ती हुन्, जो आफ्नैमात्र समुदायको वर्चस्व चाहन्छन् । हामी समतावादी हौं । मधेसी असमानताका सिकार बनाइएका छन् । त्यसैले हामी मधेसवादी हौं । हामी परिवर्तनवादी हौं । हामी वर्तमान अवस्थामा बस्न चाह“दैनौं । पहिचान मेटाउनु, दबाएर राख्नु एकताको आधार हुन सक्दैन । यो युग जोड्ने युग हो, तोड्ने होइन । वषौर्ंदेखि आपसमा लडिरहेका राष्ट्र, जातजाति एकअर्कालाई स्वीकार गरेर बस्न खोजिरहेका छन् । हामीलाई स्वीकार गर्दा हामी अस्वीकार गर्दैनौं, तर हामी आफ्नो पहिचान र स्वाभिमानको रक्षा गर्न दृढ छौं । त्यसैले हाम्रो एउटैमात्र भनाइ छ, हरथोक साझा र सबैमा आधा । तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीो लक्ष्य पर्ूर्तिका लागि समर्पित रहनेछ । यसका लागि सबै मधेसी अधिकारवादीको एकजुटता आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो पार्टर्ीी तर्राई-मधेस बृहत् राजनीति शक्ति निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिनेछ । हामी पुनः सम्पर्ूण्ा मधेसी अधिकारवादी शक्तिलाई एकजुटताको आग्रह गछौर्ं, किनभने लक्ष्य प्राप्तिको यही एकमात्र उपाय हो।
केही विद्वान, राजनेता, र्सवसाधारणले हाम्रो प्रयासको यथार्थ चित्रण गर्नुभएको छ । हामी उहा“हरूप्रति आभारी छौं । उहा“हरूले व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिन्छौं।
संविधानसभाको हामी विरोधी होइनौं । सबैको र्सार्थक र न्यायपर्ूण्ा उपस्थितियुक्त उपलिब्धमूलक संविधानसभा हुने वातावरण हुनुपर्‍यो । सहज रूपमा शान्तिपर्ूण्ा तरिकाबाट आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने जनताको अधिकारको हामी सम्मान गर्र्छौं । तर बल प्रयोग गरी समस्याको समाधान खोज्ने मानसिकतासित हाम्रो पर्ूण्ा असहमति छ । त्यसैले यसका लागि र्सवप्रथम मधेसमा शान्तिपर्ूण्ा अवस्था र स्थिति सहज हुनु आवश्यक छ।
नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीआनन्दीदेवी) र मधेसी जनअधिकार फोरमबाट समूहगत रूपमा र जिल्ला-जिल्लाबाट समूहगत एवं व्यक्तिगत रूपमा तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी समाहित हुनुभएका एवं हाम्रँे अभियानलाई र्समर्थन गर्नुभएका सबैमा म आफ्नोतर्फाट र तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीे तर्फाट हार्दिक स्वागत गर्छर्ुु
न्यायपर्ूण्ा र जायज मागनिम्ति संर्घष्ाको हाम्रँे यस यात्रामा स्नेह, र्समर्थन र सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्र्छौं । यस्तै सहयोग, र्समर्थन र मार्गदर्शनको आशा राख्छौं ।
The year of the madhes	We havearight to declare independence – Mahanta Thakur
1. आकार | January 12, 2008 at 4:27 am
कुरा कत्ति मिठो छ , तर ठाकुर ले पनि खै किन बिखण्डन ल्याउने अभिव्यक्ति दिए ???